Nagu saabsan - TIANJIN CHENG YANG INDUSTRIAL CO., LTD
Tianjin Chengyang Warshadaha Co., Ltd.
Waxaan ku hawlan nahay qalab heerkulkiisu sarreeyo.
Tianjin Chengyang Industrial Co., Ltd. waxay ku taal magaalada dekedda leh ee Tianjin ee woqooyiga Shiinaha. Shirkadeena oo dabooleysa aag 32000 sqm ah, oo in kabadan 200 oo shaqaale ah iyo qiime wax soo saar sanadle ah oo ka badan 15 milyan yuan. Shirkaddu waxay leedahay qalab wax soo saar oo horumarsan oo hadda waxay ku qalabeysan tahay in ka badan 120 wiish oo bilaa biibiile ah, 3 mashiinno dheeh dheeh ah, 4 mashiin oo aluminium isku darsamaya, iyo hal xarig oo wax soo saar ah oo silikoon ah. Waxaan ku hawlan nahay qalab heerkulkiisu sarreeyo. Shirkaddayadu waxay ku lug leedahay silikoon maro dahaarka leh, PU maro fiber-glazed, maro muraayad Teflon, aluminium bireed dahaarka leh, dharka dabka, bustaha alxanka, maro fiber dhalada, kuwaas oo inta badan loo isticmaalo dhismaha, gaadiidka, elektaroniga, warshadaha kiimikada, ilaalinta deegaanka, difaaca qaranka iyo warshadaha kale. U heellan xakamaynta tayada adag iyo adeegga macmiilka oo laga fiirsado, xubnaheenna khibrada leh ayaa had iyo jeer diyaar u ah inay ka wada hadlaan shuruudahaaga ayna hubiyaan qanacsanaanta macaamiisha oo buuxda Alaabadayadu ma aha oo kaliya inay si fiican uga iibiso dhammaan magaalooyinka iyo gobollada ku teedsan Shiinaha laakiin sidoo kale laga iibiyo adduunka oo idil, sida Ameerika, Australia, Kanada, Japan, Hindiya, Kuuriyada Koonfureed, Holland, Norway, Singapore iyo wixii la mid ah.
Shirkadeenu waxay leedahay awood farsamo oo xoog leh, tayo sare leh, soosaarida waqtigeeda, adeeg wanaagsan oo iibka kadib, sumcad sare, shirkadu si "isdaba joog ah, adag, macquul ah, hal abuur leh" ruux. Fiiro gaar ah u leh maamulka faahfaahsan, hoos-u-dhulka, hormoodka iyo ganacsiga . Go'an alaabta ceyriinka ee heerka koowaad ee warshadda, korsashada farsamada casriga ah waxay siisaa alaabada heerka koowaad ee isticmaalaha iyo adeegga ugufiican. Shirkaddu waxay diyaar u tahay inay lashaqeyso inta badan dadka isticmaala iyo dadka wax garadka ah. Ujeeddadeennu waa inaan u abuurno qiime macaamiisha, waxaan rajeyneynaa inaan kula shaqeyno!
Mashiinka dharka makiinada muraayadaha silikoonka ah
Waxaan ku dadaaleynaa inaan macaamiisha siino adeeg deg deg ah iyo gaarsiinta waqtigeeda. Waxaan sidoo kale leenahay koox xirfadlayaal iib ah si loo hubiyo kaamilnaanta macaamiisha. Isgaarsiinta iyo adeeg wanaagsan; Waxaan soo dhaweyneynaa amarrada OEM iyo ODM. Waxaan ka caawin karnaa macaamiisha inay dhisaan astaan ​​u gaar ah dhumucda, dhererka, midabka iyo baakadka alaabta; waxaan haynaa sannado badan oo khibrad dhoofineed ah, waxaan ka caawin karnaa macaamiisha xallinta gaadiidka iyo kuwo kaloo badan Marka laga hadlayo dhibaatooyinka. Haddii aad ka dooraneyso shey hadda jira buugyarahayaga ama aad raadineyso kaalmada injineernimada dalabkaaga, waad la hadli kartaa xaruntayada adeegga macaamiisha.
Maro adag Maro adag, Aluminized Maro adag, Maro adag Dahaarka Acrylic, Maro Maro ah, Pu Dahaarka Maro adag Fabric Maro, Acrylic dahaarka Maro adag Fabric,